Best Android Games na 2015
Ị na-na-achọ ndị kasị mma Android egwuregwu na 2015 iji budata? Lee dịghị ihe ọzọ n'ihi na ịtụnanya, ụtọ, na mma android egwuregwu 2015 e jiri nlezianya họrọ n'ihi na gị ụtọ. Ọ bụrụ na ị ẹmende a ọhụrụ Samsung Galaxy, Nexus, ma ọ bụ Sony, ị ga-ahụ na a zuru ọsọ-ala nke na-akpali akpali egwuregwu na i nwere ike na-ahụ na gị pụrụ ichetụ n'echiche. Yana ndepụta nke kasị mma egwuregwu, ị ga-ahụ ọtụtụ mmelite nke egwuregwu, Fim, price, na ụfọdụ ndị ọzọ ihe ọmụma bara uru nke ga-hụ na ị họrọ naanị egwuregwu na ị chọrọ. Ya mere, ọ bụrụ na ị dị njikere na-amalite mkpatụ na nbudata na, ebe a bụ ihe kacha mma 20 Android egwuregwu n'ihi na 2015.
1. Always Mgbe ụfọdụ Monsters
Mgbe niile mgbe ụfọdụ nnukwu anụ ndibọhọ award maka kasị mma ide 2004. egwuregwu bụ banyere ndụ na hassles na ya. Dị iche iche n'akụkụ nile nke ndụ ukwuu n'ime nghọta na ike ahụ bụ na n'akụkụ showcased na egwuregwu a. Players Nwere ike inwe njikere ezute anam-a-nkwenkwe ọnọdụ na ndị fọrọ nke nta yiri eziokwu na ọnọdụ ndị ga-amanye gị ime nhọrọ, na kwa ihu ya na ya pụta.
Platform: Androids 2.2 gbakwunyere
Chrono Ginger na-mepụtara Dream Team; ihe-anaghị Emebi Emebi ụdị egwuregwu na-mma weere dị ka revolutionary. Ọ kpakpando The Epic akụkọ na revolutionary gameplay nke oge njem na oké njem. Egwuregwu captures mmasị nke Ịgba Cha Cha ụlọ ọrụ; na ebe ọ bụ ya iwebata ọ rere nde n'ụwa nile.
3. Pụrụ Iche Saga
Platform: Androids 4.1 gbakwunyere
Ọkọlọtọ Saga bụ a Viking kpaliri egwuregwu na-ewe egwuregwu na The Epic njem ebe ha ga-eme ka usoro mkpebi nke nwekwara tụgharịa na-emetụta onwe ha, ha akụkọ. Ọzọkwa, o burugodu na a na-enwe mmetụta na onye larịị, mkpebi gị ga-emetụta n'ihi nke esemokwu okosobode n'oge mgba maka nlanarị.
4. n'Ụlọ Mkpọrọ Life RPG
Platform: Androids 2.3.3 gbakwunyere
Mkpọrọ ndụ RPG natara a otutu accolades ebe ya iwebata n'ime egwuregwu ụwa. Ọ na-gosiri top 1 ụgwọ ngwa na dum egwuregwu, top 1 RPG egwuregwu na banyere 89 mba, top 3 na-adịbeghị anya ugwo egwuregwu ke US na ọtụtụ ndị ọzọ. Egwuregwu bụ adọrọ nnọọ mmasị na ozugbo ị na-amalite na-akpọ ya, ị ga-achọghị ịkwụsị. Mkpọrọ Life RPG bụ n'ezie a ngọngọ buster egwuregwu dị ghaghi chaị gị.
5. Awakpoo Night
Ọgụ n'abalị bụ a adịchaghị egwuregwu dị a ga-enwe maka Fans na fancy atụgharị-dabeere na-egosi ọnọdụ egwuregwu. Ị na-akwado nke Stevens n'Eluigwe na Ala? Ọ bụrụ na ị bụghị, mgbe na-akpọ egwuregwu ị ga-maa-aghọ otu. Ọ na-lauded dị ka a egwuregwu na onye ọ bụla nwere ike ịnụ ụtọ na dị ka na-ewu ewu na uche, egwuregwu kwuru na-abụ otu nke kasị mma RPG mobile.
6. Monsters Rie My ọmụmụ achicha
Monsters rie m ọmụmụ achicha dị ka aha na-egosi bụ egwuregwu na-bụ jam-juru n'ọnụ na nnukwu anụ. E wezụga nnukwu anụ, ọ na-parades ndị ọzọ na atụmatụ dị ka achịcha, mgbaghoju anya ibe n'ibe, odide a na-apụghị unlocked, mkpari naaa, Weiner nkịta, secrete traktị, wdg Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya njem, mgbe ahụ, ị ​​ga-ada na ịhụnanya na egwuregwu a. E nwere ọtụtụ ihe na-eme, ebe ịhụ ka kpokọtara Island, Gogapoe Island, na ndị ọzọ.
7. Boomerang Mee na Race
Platform: Androids ma gụọ 2.3 gbakwunyere
Ò nwetụla mgbe ị chọrọ ike a Boomerang racer na eleghị anya mpi na katuunu odide ke ụgbọala racing? Ọ bụrụ na ị nwere bụghị, mgbe ahụ a Boomerang katuunu egwuregwu bụ dị nnọọ ka ị dị ka ọ na-enyere gị ike ị nnọọ onwe pụrụ iche racing ụgbọ ala.
Platform: Androids 4.0 gbakwunyere
Gịnị ka unu chere mere mgbe a dị ize ndụ na-apụnara mmadụ gbapụrụ n'ụlọ mkpọrọ nri banyere oge a cat nke obere nwa ọkọdọ zuru? Ọ bụrụ na ị na-eche, gịnị mere unu adịghị dị nnọọ ibudata egwuregwu a ịchọpụta. Egwuregwu bụ kpọmkwem maka ụmụ noo n'etiti 4 ruo nke 7 afọ.
9. Adventure Time Game Ọkachamara
Platform: Androids 4.1 elu
Ị nwere ọchịchọ na-egwu njem ugboro egwuregwu? Ọ bụrụ na gị azịza ya bụ ee, mgbe ahụ, na-awụlikwa elu na na ibudata egwuregwu a na izute odide na n'ebe ndị dị ka ulo mkporo, swiiti Kingdoms, Jake na fin ihu n'ala ahịhịa ndụ jupụtara, wdg
Egwuregwu a mejupụtara odide dị ka fruity ike, twisty egwuregwu mgbagwoju anya, stretchy agwọ, tọrọ ụtọ alaeze, na ọtụtụ ndị ọzọ.
11.-enweghị isi na soseji na Meatland
Ọ gbagwojuru onye ọ bụla pụrụ ichetụ n'echiche ihe a soseji na-eme na a Meatland - n'ezie? Nke a bụ egwuregwu na-bụ-enweghị isi na na kwa ada enweghị isi na. Players Na egwuregwu a na-anọchi anya site a ndinyanade mbịne soseji-agbalị iji nweta site na a ndiọk ụwa.
12. Ndi na-aga aga
Nke a adịghị ada ụda dị ka ezigbo ndibiat egwuregwu; ma adịghị eduhie, ọ bụ ihe na-akpali akpali karịa ọ na-ada. Ọ na-enye ikerike nke fun-ugboro ka ị na-agbalị na-eduzi 15 wa si otu isi nke ọzọ.
Platform: Androids 3.0 gbakwunyere
Ò nwetụla mgbe ị chọrọ ịghọ a tutuntu? Olee banyere nbudata egwuregwu a ịhụ otú eme tutuntu Sam Pearce-arụ si na njedebe.
Echiche nke egwuregwu a lekwasịrị anya na-akpụ akpụ Nnọchiteanya Ukwu 47 akpụ ụdị gburugburu a usoro nke okporo dabeere etoju na-enweghị ndị nche spotting omume gị.
A bụ ihe ọzọ Android egwuregwu 2015 na-ewe a gbara na-asọkọta ọnụ kaadị na ọnụ ọgụgụ na egwuregwu na-eji naanị multiples nke threes.
16. Ncheta Valley
Nke a bụ ihe award emeri egwuregwu ahụ e debere na usoro nke Escher. Ebumnuche nke egwuregwu bụ iji na-aghọgbu larịị site n'usoro n'usoro echiche.
17. Nne nne Smith Free
Nke a bụ gị ohere na-egwu ezi Ihọd na-enyere Nne nne Smith enwetaghị onye ohi na-ezu ohi ya apụl.
18. Mkpa Speed ​​Kasị Chọrọ
Egwuregwu bụ otu nnọọ ikpọ onye na nnọọ egwu ndịna. Ọ utilizes na mobile n'elu ikpo okwu na ya nnọọ ókè.
Nke a bụ a yi na-akpali akpali Arcade racing egwuregwu usoro na onye ọ bụla ga-n'anya na-egwu - Jikọọ na ngwa ngwa, ike, na keikuku stunts.
Platform: Androids: s.3 gbakwunyere
A bụ ihe ọzọ kediegwu racing egwuregwu na-egosi na ndụ n'ezie racing fọrọ nke nta n'ụzọ zuru okè. Players Na-atụ anya ụgbọala ha racing ụgbọ ala na 10 tracks gburugburu ụwa.
Ị ụtọ njem gị nnọọ na-aga site ndị a Androids egwuregwu 2015 nhọrọ? Ọ bụrụ na ị nwere, mgbe ahụ, ị ​​ga-ikweta na ha bụ, n'ezie, ịtụnanya selections na-ekwe nkwa ibu nke fun na obi ụtọ. Gịnị mere unu adịghị amalite ugbu a site na nbudata onye ọ bụla na catches gị fancy?
> Resource> emulator> Best android egwuregwu na 2015